ကြော်ငြာ reshaping ဖြစ်ကြောင်း4ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာခေတ်ရေစီးကြောင်း – Masso Myanmar
ကြော်ငြာ reshaping ဖြစ်ကြောင်း4ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာခေတ်ရေစီးကြောင်း
Posted on 10 January, 2013 23 September, 2017 by vanda
လူတွေကသူတို့တဦးတည်းကိုမြင်သောအခါအလွန်ကြီးစွာသောကြော်ငြာကိုသိပေမယ့်ညာဘက်အချိန်တွင်ညာဘက်လူတွေကိုကြောင်းကြော်ငြာရတဲ့သူ့ဟာသူအဘို့အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုဟောင်းနည်းဗျူဟာပေါရာဏပြန်ဆိုကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့သစ်ကိုအခွင့်အလမ်းများကိုဖွင့်လှစ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာအတွက်ဗဟိုမေးခွန်းများကိုယနေ့နေသောခေါင်းစဉ်: ဘယ်မှာလူတွေကနားမထောငျလိမျ့မညျနညျး အဘယ်အရာကိုအကြောင်းအရာသူတို့နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံကြမည်နည်း သူတို့ကိုငါဘယ်လိုရောက်ရှိသလဲ? အဖြေစက်မှုလုပ်ငန်းပုံဖော်ဖြစ်ကြောင်းလေးခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုနားလည်ရန်သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။
မိုဘိုင်းဗီဒီယိုကိုစားသုံးမှုလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာခြင်းနှင့်သူတို့အာရုံကိုပေးဆောင်ကြသောအခါစားသုံးသူရောက်ရှိဖို့တစ်လမ်းနှင့်အတူကြော်ငြာပေးနေပါသည်။ Ooyala ၏ Global ဗီဒီယိုအညွှန်းကိန်းအရသိရသည် Q3 2012 နှင့် Q3 2014 အကြား, စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ကိုဗီဒီယိုစားသုံးမှု 400 ရာခိုင်နှုန်းသာကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ယခုကစားအားလုံးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်း။ ဤသည်လမ်းကြောင်းသစ်အစာရှောင်ခြင်း 4G / LTE ကိုလွှမ်းခြုံ၏ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့်တလျှောက်ကူညီပေးခဲ့သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုကြီး iPhone6မှာမျက်နှာပြင်နဲ့အခြား ” phablet ‘(screen အရွယ်အစားကြီးမားသည့်စမတ်ဖုန်းများ) ၏ကျော်ကြားမှုကိုလည်းမိုဘိုင်းဗီဒီယိုကြီးထွားလာအရေးပါမှုကိုထင်ဟပ်။ phablet စျေးကွက်ပြည့်နေပါသည်အမျှသူတို့အလှည့်အတွက်မိုဘိုင်းဗီဒီယိုတိုးတက်မှုအစာကျွေးပါလိမ့်မယ်။
မိုဘိုင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသငျသညျမှာ “သုံ့ပန်း” ပရိသတ်ကိုမခေါ်စေခြင်းငှါ, ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ တီဗီကြော်ငြာကိုစတင်တဲ့အခါမှာလူတွေကသူတို့ရဲ့ဖုန်းများမှာချကြည့်ပါ။ ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်မြေအောက်ရထားတွင်, လူများတို့သည်လည်းမိမိတို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်သားပြင်အစားပေုံအတွက်အားဖြင့်ဖြတ်သန်းကြော်ငြာများအာရုံစိုက်ပါ။ ရေဒီယိုကြော်ငြာကိုစတင်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘူတာကိုပြောင်းလဲ။ လူတွေပြီးသားသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းမှာရှာဖွေနေကြသောအခါသို့သော်ဘာမှသူတို့ကိုအာရုံကိုသွားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီညီညွတ်သောအာရုံစိုက်မှုများ၏အားသာချက်ယူမိုဘိုင်းဗွီဒီယိုကြော်ငြာများကိုသုံးပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် site ၏အကြောင်းအရာနှင့်စတိုင်အတုယူကြောင်းကြော်ငြာ feature တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဘာသာစကားကြော်ငြာစဉ်းစားပါ။ native ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်တစ်ခုလိုက်သည်ခန့်မှန်းချက်အရသိရသည်ကြော်ငြာရှင်များကဒီ format နဲ့အတူပျှမ်းမျှထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအထက်တွင်မြင်နေကြသည်အကြီးအကျယ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 2018 ဖွငျ့ $ 8.8 ဘီလီယံ 2014 ခုနှစ် $ 3.2 ဘီလီယံကနေတက်ပါလိမ့်မယ်။
ဇာတိကြော်ငြာတွေပုံမှန်အားတိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမြှင့်တင်ခြင်းမရှိဘဲလူတွေ, အကြောင်းကြားဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်လာအောင်နှိုးဆွဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းရှည်ပုံစံဘလော့ဂ်ပို့စ်များ, infographics သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာ, အဝတ်အစားလက်လီအရောင်းဆိုင်ထံမှတစ်ဦးနဖူးစည်းစာတမ်းကြော်ငြာတစ်ဦးကိုဆောင်းတွင်းအဝတ်အစားရောင်းချမြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့လက်လီအရောင်းဆိုင်ကနေဇာတိကြော်ငြာအစားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖက်ရှင်အကြံပေးချက်များဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဇာတိကြော်ငြာတွေ “ကရာထူးတိုး” သို့မဟုတ် “post ကိုပေးဆောင်”, ထိုကဲ့သို့သော “စပွန်ဆာပေးထားအကြောင်းအရာ” အဖြစ်တစ်ဦးမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်နှင့်အတူ tagged နေကြသည်။
သင် “salesy” ကြော်ငြာအကြောင်းအရာအားဖြင့်ပယ်ခံရမည်လေ့အဘယ်သူသည်အနှစ်တစ်ထောင်, ပစ်မှတ်ထားဆိုရင်တော့ဇာတိကြော်ငြာစဉ်းစားပါ။ အခုတော့ကြေညာသူ (ဆိုလိုသူတို့ကိုရေးရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ကူညီပေးနေ) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကြော်ငြာရှင်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဖြစ်ကြောင်း, ကကျွမ်းကျင်သူအကူအညီရရန်လွယ်ကူပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကအထိ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာလိမ်လည်မှုရန်အလွန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ အတော်များများကအဘယ်သူမျှမဝေးအလုံအလောက်ကြည့်ဖို့ဆင်းပြီးကြောင်း Bottom-Of-The-စာမျက်နှာကြော်ငြာတွေများအတွက်ပေးဆောင်သို့လမ်းလွဲခဲ့သည်။ “လိမ်လည်မှုကိုကလစ်နှိပ်ပါ” စတဲ့ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှန်ကတော့လူအခြို့သူတို့ ( “bot တွေဟာ”) ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်အတွက်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဖက် ” ကြော်ငြာဥပဒေကြမ်းများကိုတက်ပြေးနိုင်သဘောပေါက်သည်အလိုအလျောက်ကြော်ငြာတွေကိုကလစ်နှိပ်ပါသော။ ဒီအလေ့အကျင့်လိမ်လည် bot အသွားအလာ, ကျေးဇူးတင်စရာကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်နည်းပညာ 2014. ၌ရှိသကဲ့သို့အများကြီးအဖြစ် $ 11.6 ဘီလီယံအထိကုန်ကျခဲ့ကြပေမည်နှင့် “ကြည့်ရှုနိုင်သည်တွေ့ကြုံ” ဟုခေါ်ကာကြော်ငြာမော်ဒယ်ကဤပြဿနာများ၏နှစ်ဦးစလုံးကိုချေမှုန်းဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာပြံ့နှံ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကြော်ငြာနိမ့်ဆုံးကြာချိန်များအတွက်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏မျက်နှာပြင်ပေါ်လျှင်ကြည့်ရှုဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူ, ကြော်ငြာရှင်များသာစွဲချက်တင်နေကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံအရတစ်ဦးကြည့်ရှုနိုင်သည်စှဲအဖြစ်ရေတွက်ဖို့ display ကိုကြော်ငြာအဘို့, pixels ကို၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်စက္ကန့်တစ်နိမ့်ဆုံးအဘို့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာဖို့ရှိသည်။ ဗီဒီယို, pixels ကို 50 ရာခိုင်နှုန်းနှစ်ခုစက္ကန့်တစ်နိမ့်ဆုံးအဘို့ပေါ်လာဖို့ရှိသည်။ သူတို့တစ်တွေမမှန်သောတဦးတည်းအနေဖြင့်စစ်မှန်သောအသုံးပြုသူအမြင်ခွဲခြားသောလုပ်ရပ်များဖြည့်စွက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ bot တွေဟာလိမ်လည်ကြည့်ရှုဆွဲဆောင်မှုကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။
သို့သော်များစွာသောအမှုများအတွက်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုစက္ကန့်တစ်ဦးကြည့်ရှုသူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နီးပါးလုံလောက်သောအချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျကြည့်ရှုတွေ့ကြုံဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ, သင်ကဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေ run ဖို့စီစဉ်အထူးသဖြင့်လျှင်, သင်အာမခံအချိန် slot နှစ်ခု (ဥပမာငါးခု, 10 သို့မဟုတ် 20 စက္ကန့်) ကိုဝယ်ခြင်းငှါထို option ရှိသည်သေချာပါစေ။ သင်တစ်ဦးကို 10 စက္ကန့် slot ကဝယ်ယူလိုလျှင်သင့်ရဲ့ကြော်ငြာတစ်ဆယ်စက္ကန့်သို့မဟုတ်ကြာကြာအဘို့အစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုခဲ့လျှင်, သင်သာတရားစွဲဆိုခံရချင်ပါတယ်။ သငျသညျပေးဆောင်နှုန်းသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုကြော်ငြာနှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုထင်ဟပ်။
ကြော်ငြာတွေကိုညာဖက်ကလူကိုရောက်ရှိပါလျှင်နယူးချန်နယ်လ်, နည်းဗျူဟာများနှင့်ငွေပေးချေမော်ဒယ်များသာသင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုအစေခံပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစားစားသုံးသူတစ်ဦးကြီးများအစုံပေါ်တွင်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုသုံးစွဲခြင်းထက်, သင်ပိုမိုထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ဖောက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး fit သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားဖို့အမူအကျင့်ဒေတာကိုသုံးနိုင်သည်။
ကြော်ငြာရှင်များအများအားသူတို့ဖောက်သည်ထွက်ဆွဲထားဖို့မျှော်လင့်ထားရှိရာတစ်ဦးချင်းစီဝက်ဘ်ဆိုက်များပစ်မှတ်ထားနေစဉ်, အမူအကျင့် data တွေကိုသင်မျိုးစုံကြော်ငြာဂုဏ်သတ္တိများကိုဖြတ်ပြီးကလူအုပ်စုများပစ်မှတ်ထားဖို့ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ဒီချဉ်းကပ်မှုအပျေါမှာပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အမူအကျင့်ပစ်မှတ်ပံ့ပိုးပေးအွန်လိုင်းရှာဖွေမှုများကိုအင်တာနက် browsing အတွက်အလေ့အထများ, သမိုင်း purchasing ပြီးအများကြီးပိုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီးအုပ်စုတစု (ငယ်ရွယ်သောလေးတွေနှင့်အတူဥပမာ, မိခင်များ) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျစားသုံးသူများ၏တိကျသောအမျိုးအစားများကိုပစ်မှတ်ထားနေလျှင်, အမူအကျင့်ဒေတာတစ်ဦး bungled မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်ကြီးမားသောအောင်ပွဲများအကြားခြားနားချက်ကိုဆိုလိုတာနိုင်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဗွီဒီယိုကြော်ငြာများ, ဇာတိကြော်ငြာ, ကြည့်ရှုနိုင်သည်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အမူအကျင့်ပစ်မှတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာအတွက် defining ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်ကြော်ငြာရှင်များအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောမဟာဗျူဟာအသတ်မရှိအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤအခေတ်ရေစီးကြောင်းသရုပျဖျောသကဲ့သို့, ချန်နယ်လ်အစဉ်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသည်နှင့်အခြားအဆုံးအပေါ်ပရိသတ်ကိုအသစ်အလေ့အကငျြ့မြားနှငျ့ဦးစားပေးရှိပါတယ်။ ဤအသစ်ကိုလေးမဟာဗျူဟာများစမ်းသပ်နှင့်သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအားဖြင့်သင့်ကြော်ငြာသုံးစွဲထဲကအများဆုံးကိုရယူပါ။
Posted in ဒစ်ဂျစ်တယ်Tagged alignment, captions, content, css, export, image, markup
မူပိုင်ခွင့် © 2017 Masso မြန်မာ